सिन्धुलीवासीले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर घरमै दशैं तिहार मान्न पाउने:: Naya Nepal
वाशिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोभिड-१९ को उपचारको अवधि पूरा गरेको र यस साताको अन्त्यदेखि नै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनसक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
ट्रम्पका चिकित्सक डा. सियन कोन्लेले राष्ट्रपति ट्रम्प अहिले ‘निकै राम्रो’ र स्वास्थ्य स्थिर रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार सम्भवत: अर्को कोभिड परीक्षण गराउने र साताको अन्त्यदेखि नै चुनावी र्‍यालीहरुमा सहभागी हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी बिहीबार हुने दोस्रो टेलिभिजन डिबेटमा सहभागी नहुनेसमेत बताएका छन् ।
आयोजकले ट्रम्पक र उनका डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडनबीचको निर्धारित बहस इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने बताइएपछि ट्रम्पले आफूलाई त्यो मान्य नहुने बताएका हुन् ।
आयोजकहरूले अक्टोबर १५ तारिखमा हुने बहसमा संलग्‍न सबैको ‘स्वास्थ्य र सुरक्षाको निम्ति’ दुवै प्रतिस्पर्धीलाई फरक-फरक स्थानबाट सहभागी गराइने बताएका थिए ।
त्यसबाट आक्रोशित राष्ट्रपति ट्रम्पले फक्स बिजनेश च्यानललाई दिएको फोन अन्तर्वार्तामा ‘समय खेर फाल्न आफू त्यसमा सहभागी नहुने’ बताएका हुन् ।
आगामी डिबेट के हुने भन्‍नेबारे अन्योलता देखिएको छ ।
त्यसैगरी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभकी स्पिकर न्यान्सी पेलोसीले राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्‍नहरु अनुत्तरित रहेको बताएकी छन् । उनले राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था मूल्यांकनका लागि शुक्रबार संसदमा एक आयोग गठन गर्नेसमेत बताएकी छन् ।
पेलोसीको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विटरमार्फत भनेका छन्,”म्याडम पेलोसी ‘पागल’ भइन् ।”
बिहीबार व्हाइट हाउसबाट जारी गरिएको स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी जानकारीमा चिकित्सक डा. कोन्लेले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार भएको छ । उनलाई अहिले कुनै लक्षण देखिएको छैन ।”
वासिङ्टनपी । अमेरिकी राष्ट्रपतीय बहसका लागि अनिच्छुक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी र्‍यालीका लागि भने तयार रहेको बताएका छन् ।
गत शुक्रवार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका ट्रम्पले एक हप्ता नहुँदै बिहीवार आफूलाई पूर्ण स्वास्थ्यलाभ भइसकेकाले र्यालीमा सहभागी हुन सक्षम रहेको दाबी गरेका छन् ।
अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म दुई लाख १० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । अरु लाखौं व्यक्ति संक्रमित भएका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्प कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि गत शुक्रवार अस्पताल गएका थिए भने सोमवार निवास फर्किएका थिए ।
निवासबाटै पनि उनलाई उपचार गराइरहेका चिकित्सकहरुले राष्ट्रपति ट्रम्प अब सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने बताएका छन् ।
उनका फिजिसियन सेन कोन्लीले शनिवारदेखि राष्ट्रपति ट्रम्प सार्वजनिक गतिविधिहरुमा सहभागी हुन सक्षम रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
स्थानीय समय अनुसार बिहीबार राती फक्स न्युजलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले शनिवार फ्लोरिडामा हुने र्यालीमा आफू सहभागी हुन चाहेको बताएका छन् ।
टेलिफोनबाट गरिएको अन्तरवार्ताका क्रममा उनले आफू कुनै कुरामा पनि कमजोर र असक्षम छु जस्तो नलागेको जवाफ दिएका थिए ।
सोही अन्तरवार्तामा राष्ट्रपतिय बहसमा भने आफू सहभागी हुन नचाहेको उनले बताएका थिए ।
उनीहरुका बीचमा पहिलो बहस अघिल्लो हप्ता भएको थियो । सो बहसमा ट्रम्पको प्रस्तुति राम्रो नभएको र अर्का प्रतिस्पर्धी बाइडेनले धेरैको मन जितेको चर्चा भइरहेका बेला ट्रम्पले बहसमा सहभागी नहुने निर्णय लिएका हुन् ।
अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर ३ तारिखका दिन हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प रिपब्लीकनको तर्फबाट र पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन डेमोक्रेटिको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन् ।
त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिमा ट्रम्पको साथमा वर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र बाइडेनको साथमा सिनेटर कमला ह्यारिस रहेकी छन् । उनीहरुका बीचमा पहिलो बहस बिहीवार भएको थियो ।